Baarka Round ee qodista warshadda mashiinka daloolka qoto dheer | Deshen
Nooca: qori qodis qoriga
Waxyaabaha: Tungsten Carbide
Cabbirka dhexroorka: 1-50mm
Dhererka guud: 1-4000mm
Isticmaal: qodista birta
Tayada dushiisa: tayo sare leh
Amarka muunadda: haa aqbal
Heer aan caadi ahayn: Haa aqbal
Caarad carbide brazed hal biibiile Gundrilling xoogaa biraha qodista Deep Hole Gundrilling qori carbide qodista
Sariirta mashiinka iyo tareenka hagaha waxaa lagu tuuraa hal jir, sariirta mashiinka waxaa lagu daaweeyaa gabowga dabiiciga ah in ka badan laba sano si loo hubiyo waxqabadka mashiinka
Qalabka ugu weyn: laga keeno Yurub, Ameerika, Japan iyo Taiwan
Nidaamka xakamaynta: Omron NC ama jiilka cusub CNC
Wakiil: Iscar qoditaanka godka qotada dheer ee taxanaha qoriga qoriga daab
Qaabka Mashiinka qodida godka qoto dheer DS2-25mm
Awoodda Dhexroor qodista 2-16mm
Qotada ceel -biyood dhinac ah 650mm
Dhexroorka xajmiga ugu badan ee Chuck 45mm (way ballaarin kartaa caarada cufan)
Dhexroorka ugu yar ee xajinta 3.5mm
Heerka isku -urursiga gudaha 0.05 (gudaheeda)
Xawaaraha Heerka quudinta 0-600
Xawaaraha dunmiiqa 0-8000r/min
Adeegga dunmiiqa 3.75KW
Kanaalka Sled 1KW
Beddelidda soo noqnoqoshada ee workpiece 0.75KW
Awoodda guud 11KW
Nidaamka Haydarooliga Goynta cadaadiska bamka saliidda 6-120kg/cm²
Socodka wax soo saarka ee bamka saliidda 0-25L/daqiiqo
Goynta awoodda haanta saliidda 600L
Awoodda Dhexroor qodista 2-25mm
Dhexroorka xajmiga ugu badan ee Chuck 70mm (way ballaarin kartaa caarada cufan)
Heerka isku -urursiga gudaha 0.05 (gudaha）
Adeegga dunmiiqa 5.5KW
Kanaalka Sled 2KW
Awoodda guud 13.5KW
Qaabka Daloolka Eccentric 2-12mm mashiinka qodista qoto dheer
Awoodda Dhexroor qodista 2-12mm
Hore: TSK2180 MAKIINADDA HONING DEEPHOLE DHEERAADKA SARE CNC
Xiga: Tallaabooyinka Qorista Qoryaha La Tilmaami Karo
Xakamaynta tayada: dhammaan aaladahayagu waxay marayaan imtixaan sax ah kahor dhoofinta. waxaan leenahay 10 mishiinka imtixaanka go'an
2.Qiimaha Warshadaha: Waxaan nahay soo -saareyaal, dhammaan qiimuhu waa qiimaha warshadda, qiimaha tartanka
3. Si dhakhso leh ugu jawaab: Weydiintaada la xiriirta aaladahayaga, waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa gudaha 24 saacadood gudahood.
4. OEM & ODM waa la aqbalay: Waxaan soo saari karnaa qalab sida sawirkaaga.
5.Ilaalinta aaggaaga iibka, fikradaha naqshadeynta iyo dhammaan macluumaadkaaga gaarka ah.
Adeegga qodista 6.Gun ayaa ugu fiican
Dhexroorka talooyinka (mm) Dhererka carbide (mm) Dhererka shiidi (mm) Dulqaad (mm)
1. Waxaan nahay Is -dhexgalka Warshadaha iyo Ganacsiga waxsoosaarka taxanaha carbide tungsten carbide, Kala -sooca ugu ballaadhan, Awoodda wax -soo -saarka ugu Fiican, Xakamaynta tayada ugu Fiican, Adeegga ugu Fiican, Qiimaha Tartanka;
2. 100% kormeerka QC ka hor shixnadda;
3.Faallo -celin 24 saac gudahood iyo Isgaarsiin Ingiriis oo Fiican;
4. Iibinta dhoofinta tababarka wanaagsan waxay bixin kartaa soo jeedin xirfadeed oo ku saabsan badeecada;
5. Samaynta habaynta sida waafaqsan waraaqaha sawirkaaga;
6.A aqbalo amar maxkamadeed iyo amar yar;
7.Acecept all term terms of T/T, L/C, union union, Paypal, Assurance Trade, iwm;
8.Soo bandhig shaybaarro bilaash ah oo ku hoos jira xaaladda xamuulka ee uu bixiyo macmiilku;
9.Survey Email-ka adeegsiga badeecadaha ayaa loo soo diri doonaa waqtigii loogu talagalay si loo dhagaysto ra'yi-celintaada, ujeeddadayadu waa isku dayga inaan macmiil kasta ku qancinno annaguna labada dhinacba WIN-WIN!
Diritaan degdeg ah:
Dezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd waa soo -saare iyo dhoofiyaha aaladaha goynta godka qoto dheer oo ay ku jiraan dhoolatuska qoriga, dib -u -qoryaha qoryaha, BTA, Trepanning, aaladaha caajiska ah, qalabka honing iwm, iyo sidoo kale aaladaha aaladda. Waxaan sidoo kale u qaybinnaa saliidaha jarista, Furimaha wax lagu gooyo, bamka buufinta buufinta ee buuxi godka qoditaanka ee qoto dheer. Waxaan ku hawlan nahay naqshadeynta alaabada iyadoo la waafajinayo heerarka tayada caalamiga ah oo leh qaabeynta ugu wanaagsan si aan u siino macaamiisha wax soo saar iyo tayo aad u wanaagsan. Bilawgii sanadka 2010, waxaan ku haysannay meel adag suuqa gudaha sidoo kale waxaan ka helnay macaamiil badan Koonfurta Bari Aasiya , Yurub iyo kuwo kale. Waxaan nahay bixiye xalka One-Stop ah oo loogu talagalay aaladaha goynta daloolka qoto dheer Intaa waxaa dheer tan, waxaan nahay soo dejiye Tungsten Carbide Tips & Rods iyo alaabo kale oo ceyriin ah oo ka yimid Yurub iyo USA
S1: Waa maxay dammaanadda alaabta carbide tungsten?
J1 , waxaan qaadan doonaa kharashka dhoofinta iyo beddelka.
Q2: Ma bixisaa shaybaarro bilaash ah?
Q3: Waa maxay shuruudahaaga ugu yar ee dalabka?
A3: Waxaan ku tilmaami doonaa MOQ shay kasta ee xaashida xigashada. Waxaan aqbalnaa tusaalaha iyo amarka tijaabada. Haddii tirada hal shay aysan gaari karin MOQ, qiimuhu waa inuu noqdaa mid muunad ah.
Q4: Waa maxay waqtiga dhalmada ee alaabtaada?
J4: Waxay ku xiran tahay helitaanka alaabada.Haddii alaabta loo baahan yahay ay taallo, waqtiga dhalmadu waxay noqon doontaa 8 maalmood oo shaqo gudahood, laakiin haddii kale waqtiga dhalmadu waxay noqon doontaa qiyaastii 20 maalmood oo shaqo.
Q5: Ma soo saari kartaa alaabada carbide-ka ah ee leh qaababka gaarka ah?
J5: Haa, waan awoodnaa. Waxaan soo saari karnaa labada mishiin dhammaadka caadiga ah iyo aalado gaar ah. Waxaan u samayn karnaa si waafaqsan sawiradaada iyo shaybaarkaaga.
Q6: Ma heli karaa jadwalkayga shaqadayda?
J6: Haa, waxaan diri doonaa jadwalka shaqada ee amarkaaga toddobaad kasta. Waxaan baari doonnaa oo tijaabin doonnaa dhammaan badeecadaha haddii ay jiraan waxyeello iyo qaybo maqan inta aan la soo dirin. Sawirada kormeerka faahfaahsan ee amarka ayaa laguu soo diri doonaa si loo xaqiijiyo ka hor dhalmada.
Faallo celintaadu waa sharaftayada ugu fiican, fadlan ha ka labalabeyn inaad na siiso ra'yi -celintaada qiimaha leh waxaanan kuu oggolaan karnaa inaad kalsooni dheeraad ah ku qabtid shirkadeena iyo alaabadayada.
haddii aad wax dhibaato ah qabtid, pls ila soo xiriir
Mashiinka qodista bar wareega
T2250 T2250A Qodista Deephole iyo Mashiinka caajiska ah
Daad CNC godka Deep gundrill la tusi karo ...